विदेशीहरुमा अष्ट्रेलियनबारे यस्ता गलत धारणा छन्
सिड्नी । कसैलाई सोध्नुहोस् जो विदेशमा बसिरहेको छ । उनीहरुले दाबी गर्दै भन्छन् अष्ट्रेलियनहरु ठूलो शानका साथ लाउड र रिल्याक्स शैलीमा बस्छन् तर उनीहरु बस्ने वातावरण भने डरलाग्दो रहेको छ ।
तर, अष्ट्रेलियाको जीवन सधै रामसे सेन्टको ‘होम एण्ड अवे समर बे ओर निबर्स’ जस्तो छैन ।
अष्ट्रेलियन जीवनशैलीलाई एकैखाले तरिकाले हेर्ने ११ साझा हेराइहरु
१. सबैजना बीचमा बस्ने गर्छन्
यो सत्य हो कि लगभग ८० प्रतिशत अष्ट्रेलियन ५० किलोमिटर कोस्टलाइनको पेरिफेरिमा बस्ने गर्छन् । तर बीचफ्रन्टको अगाडिका भागहरु अत्यन्त महंगा छन् । हामी सबै बल्र्ड हेयर सर्फर र घामका कारण बनेको खैरो छाला नदेख्दा पर्यटकहरु निराश हुन सक्छन् ।
२. यो सुर्यभन्दा पनि बढी गर्मी छ
हो, हामीले केही समय हिउँमा खेल्ने समय पाउँछन् । तर, साँच्ची भन्नुपर्दा यहाँ गर्मी छ । धेरै प्राइमरी स्कुले बच्चाहरु आफ्ना शिक्षकहरुलाई बढी गर्मी भएका कारण बिदा दिन आग्रह गर्छन् । ४० डिग्री भन्दामाथि तापमान भएमा विदा दिने नियम रहेको छ । यस यस्तो कुरा सफल भएको मलाई हालसम्म थाहा छैन । धेरै मानिसहरु ताप बढी भएका कारण अण्डा सिमेन्टमा राखेर पकाउने गर्छन् ।
३. अष्ट्रेलियन सबै गुण्डा हुन्छन्
यस कुराले कदापी अष्ट्रेलियनहरुको शानलाई मद्धत गर्दैन जब अष्ट्रेलियनहरु विदेशमा जुत्तामा रक्सी राखेर पिउने गर्छन् र पक्राउ पर्छन् । गएको सालमात्रै केही संख्यामा अष्ट्रेलियनहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । यो संख्या २३ प्रतिशतले बढेको तथा अतिथि स्वागतमा जम्मा १५ प्रतिशतले बढेको मानिएको छ । अष्ट्रेलियाका हार्ड पार्टीहरु एकदमै महँगा हुने भएका कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । न्यु साउथ तथा क्वीन्सल्याण्डमा हामी लकआउट भयौ । यहाँ घुम्ने मानिसहरुले स्वतन्त्रताको फाइदा मज्जाले उठाउन सक्छन् ।
अर्को कारण हाम्रो देश हार्ड पार्टीको लागि प्रख्यात रहेको छ । हामी प्लाष्टिकमा वाइन बेच्ने गर्छौ । जसलाई ‘गुन स्याक्स’ भन्ने गरिन्छ ।
४. सबै अष्ट्रेलियनहरु कंगारोहरु पाल्ने गर्छन्
हामी कंगारोमा चढेर स्कुल जाने गर्छौ । हामीसँग डिंगोइज र ओमब्याट्स छन् जसले गार्डको झै काम गर्छन् ।
५. हामी खतरनाक जनावरको बीचमा बस्ने गर्छौ
हामी भन्न गइरहेको छौ यो सत्य होइन । तर, मेरो घरमा दुई वटा ठूला माकुराहरु थिए । उनीहरु ठुलामात्र थिएनन्, उनीहरुले हामीलाई मार्नेसम्म प्रयास गरिरहेका थिए । त्यहाँ सार्क, स्टीनग्रेज, गोही, सर्प, वास्प र ज्यान मार्ने चराहरु समेत रहेका छन् । हामी सधै कोही पीडित हुन्छ की भनेर कुरेर बसेका छौं ।
६. हामी सधै ब्रन्च खान्छौ
हामीलाई दोषी पाउन सक्नुहुनेछ यदि अष्ट्रेलियन कोलमनिष्ट बर्नाड साल्टको कुरा मान्ने हो भने । हामीलाई घर किन्नबाट जोगाइदैछ । हाम्रो मोहलाई भत्काउने काम भएको छ ।
क्षमा पाउ साल्ट तर यहाँ त्यस्ता धेरै कारणहरु रहेका छन् किन पहिलो घर किन्नेले हाउसिङ मार्केटमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ । हम्बल एभोकाडोलाई सबै दोष लगाउनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।
७. हामी सधै घरबाहिर मासु पकाउँछौ
हामी यसो गर्न एकदमै मन पराउँछौ । तर, कोही अष्ट्रेलियनले यस्तो भन्न सकेका छैनन् । तिनीहरु प्राउन हुन्, साथी ।
८. हामी सर्ट र जुत्ता प्राय लगाउने गर्दैनौ
कुनै पनि दिन होस् हरेक सार्वजनिक ठाउँमा खाली खुट्टा हिड्न हामीलाई लाज लाग्दैन । हामी कसैको प्रवाह नगरी हिड्ने गर्छौ । हामी भोट हाल्दा समेत कहिल्यै कपडा लगाएर गएनौ ।
९. हामी हाम्रो घरलाई राम्रोसँग तताउने गर्दैनौ
र अरु कुनै विलडिङ साच्चिनै हो र । अष्ट्रेलियन तीन लेअर थप्न तयार हुन्छन् । आर्किटेक्टले घर बनाउँदा यस्ता खाले डिजाइन बनाउन भुल्छन् । उनीहरु बिर्सिन्छन् कि यहाँ तीन महिना जाडो हुन्छ । उनीहरुको ठुलो डिजाइन अव्यस्थित रुपमा कोचिएर बनाइएका घरहरु
१०. धेरै शब्दहरु छोटा बनाएर बोल्ने गर्छौ
११. हामीलाई प्रधानमन्त्री फेरिरहन मनपर्छ
हामी गर्छौ । यो एकदमै चाखलाग्दो हुन्छ जब राजनैतिक दुःखान्तहरु बन्छन् । तर, केही उल्झन र निराशाका समय पनि देखिन्छन् । जब हामी निर्वाचित नभएका लिडरहरु राखि राख्छौ । परानो शैलीमा, हस्पिटलमा सोध्ने गरिन्छ देशको प्रधानमन्त्री को हो तर यो सोधाइले तपाई गलत हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित भने गर्दैन । यो एकदमै कठीन प्रश्न बन्ने गरेको छ । हाम्रो देशमा एक वर्षमा एउटा लिडर पर्ने टिक्ने गर्दैनन् । हामी अर्को लिडरको खोजीमा छौं...